အလုပ်ရှင်များအား MOU လုပ်သားအသုံးပြုရန် အလုပ်သမားဝန်ကြီးမိန့်ကြား ၄ နိုင်ငံလုပ်သားများတရားဝင်ဖြစ်ရမည်ဟု ထပ်လောင်းသတိပေး!! – Myanmar Live
အလုပ်ရှင်များအား MOU လုပ်သားအသုံးပြုရန် အလုပ်သမားဝန်ကြီးမိန့်ကြား ၄ နိုင်ငံလုပ်သားများတရားဝင်ဖြစ်ရမည်ဟု ထပ်လောင်းသတိပေး!!
November 26, 2019 November 26, 2019 - by arnakorn saengsiritrakun
ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီး R. Jatumongkol Sonakul မှ ၄ နိုင်ငံလုပ်သားများအား (မြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်) တရားဝင်အလုပ်ငှားရမ်းကြရန်မိန်ကြားထားကြောင်း၊ တရားမ၀င်ဝင်ရောက်လာသည့်လုပ်သားများကို အထောက်အထားပြုလုပ်ပေးမည့် မူဝါဒမရှိကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ ၄ နိုင်ငံလုပ်သားများကို အလုပ်ငှားရမ်းလိုလျင် MOU စနစ်ဖြင့်တရားဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းအလုပ်သမားရှာဖွေရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ စုချာ့ ဖော်ချိုင်ဝိစေ-ကွန် ကပြောကြားသည်။ MOU စနစ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အလုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင် ခေါ်ယူမည်ဆိုပါက လုပ်ငန်းတည်ရှိရာခရိုင်အလုပ်သမားရှာဖွေရေး (သို့မဟုတ်) ဘန်ကောက်မဟာမြို့တော်အတွင်းရှိ အလုပ်သမားရှာဖွေရေးနယ်မြေရုံး (၁၀) ခုတွင် အလုပ်သမား ခေါ်ယူစာတင်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကုန်အထိ ၄ နိုင်ငံမှ MOU လုပ်သားခေါ်ယူမှုသည် ၃၆၄,၆၂၈ ဦး ရှိကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကာလတူတွင် ၄၀၃,၂၅၇ ဦးခေါ်ယူခဲ့ခြင်းကြောင့် ၉ ဒဿမ ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျခဲ့ကြောင်း၊ ၄ နိုင်ငံ MOU လုပ်သားခေါ်ယူငှားရမ်းခဲ့သည့် အလုပ်ရှင်ဦးရေ ၃၇၈၀၅ ဦးရှိကြောင်း၊ အောက်ပါလုပ်ငန်း (၃) ခု တွင်ခေါ်ယူမှုအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံဖော်ပြထားသည်။
၁။ လက်လှီ လက်ကားအရောင်းဆိုင်၊ ဈေးထဲရှိပျံကျဈေးဆိုင်၊ ကုန်စုံဆိုင်
အချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် : Department of Employment Thailand, TNEWS, THE THAI CHAMBER OF COMMERCE
Taggedlabourlabour newsMOUMyanmarMyanmar live newsMyanmarliveထိုင်းသတင်းများအလုပ်သမားရေးရာသတင်း
Previous Article နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားကို ရောင်းစားခဲ့သည့် လူပွဲစားတစ်ဦးကိုဖမ်းမိ လူကုန်ကူးခံရသူ နောက်ထပ်နှစ်ဦး ကယ်တင်နိုင်
Next Article မြန်မာ ယူ-၂၂ အသင်း ဆီးဂိမ်းစ်ပွဲဦးထွက် ၁ မှတ်ရယူနိုင်